SEENAA GABAABDUU MAGARSAA ODAA (Abdii Habiibee) 1959 - 1976 Oromia Shall be Free |
SEENAA GABAABDUU MAGARSAA ODAA (Abdii Habiibee) 1959 – 1976
bilisummaa August 6, 2018	Comments Off on SEENAA GABAABDUU MAGARSAA ODAA (Abdii Habiibee) 1959 – 1976
Hagayya 04, 2018
Abbaa Urjii tiin
Arra, qabsoon bilisummaa ummata Oromiyaa sadarkaa abdachiiftuu fii haala if duuba itti hin deebine geeyse jirti. Kan kana mirkaneeysu, murannoo fii cimina lammii ti. Murannoon baroota lameen dabran hoogganumma qeeyroo tiin hawaasichi agarsiise seena qabeeysaa fii kan baroota dhufaa jiruuf dinqifamu. Ciminni arkame kan humna diinni lammitti bobbaasaa bahe jalaa bilisoomsanii, isaanuma, diinatti bobbaasuu ti.
Diinni numaan nu cabsee aangoorra turuun waan seenaan ibsu. Haalli diinni ummata keenya gaachana godhachuu, kan harqoota gabrummaa jalatti kufuu fii baroota dila kana jalatti buluu tiif sababa. Kana hubachuun, qabsoon, warra Wayyaaneen meeshaa godhachaa baate jalaa baasuuf godhamte, gaafa galma isaa rukutetti, seenaa qabsoo bilisummaa keessatti tan gulantaa addaa dhunfattu taati.
Namoota diinni lammii isaanii tiin duuydaa garaa mudee, ijaa fii gurra godhatee kittillayyomfate, jalaa baasuurratti, arraa fii kalees, qabsoo cimtuu tu gaggeeyfame. Bobbaan karoora kanaa, yaruma hundaa, qoma bal’ina biratti murannoo fii wareegama barbaaddi. Qabsaawota haala kanaaf qophii tahaaniin, qabsoon dhihotti gaggeeyfamte, yaroo gabaabduu keessatti, qarayyoo diina jaamsitee – dhagayaa duuchitee, hegeree halaala turte, arra, hiixata harkaa bira fiddee jirti.
Lammii beekaa ykn wallaalaan dinaa waliin dhaabbatan mooraa qabsootti harkisuun, yaruma hundaa huu, bobbaa bu’aa buuftu. Tuni, arrarra kalee, gaafa amniti qabsoo bilisummaa dukkanaa, tan wal’aansoof guca taatee xurree ibsite. Haala kanaan, qabsaawota daandii wal’aansoo tan ganamaa saaqaniif, angafni, Magarsaa Odaa ykn Abdii Habiibee ti.
Magarsaan, abbaa isaa Habiibee Mahammad Umarii fii aayyoo isaa Xayyibaa Usmaa’il Nuur irraa Baha Oromiyaa, Konyaa Oborraa, Magaalaa Dadar, Ganda Haajii-tti, toora bara 1959, nama dhalate. Magarsaan, akka sammuun waa qabachuu geeyseen barnoota amantii san biratti kan ammayyaa barachutti seene. Haala saniin, bara xumura barnoota bara 1975-ii, mana barnoota Aberraa Gizaaw kan jiddu galarraa sadarkaa lamadaatti guddifame waliin hulaa sagalitti tarkaanfate.
Magarsaa hulaa sagal barachaa jiru, qabsoo bilisummaa ummata Oromiyaa keessatti jijjiramni bu’uraa arkame. Jijjiirama kana kan fide, Jaarraa Abbaa Gadaa kan qabsoo bilisummaa tiif bara 1966 manaa bahe. Jaarraan, amna dheertuu fii hidhaa bara shanii booda, qabsaawota Qeeyroo Ganamaa kanneen qabsoo hidhannoo waliin jalqabuuf karoorfatan malee, Mul’is Abbaa Gadaa waliin, itti fufuuf, Soomaaleerraa, amna miilaa tiin, Bitooteessi 14, bara 1976, Gobeelleen fullahe. San booda, odoo hin turin Raammis keessaa geerarutti seene.
Sagaleen qabsoo hidhannoo bilisummaa ummata Oromiyaa kan dhufiinsa Jaarraa tiin Raammis keessaa mandiite arkaa malee dhageeytiin nafxanyootaa fii mootummaa Dargii onnee raasuu jalqabde. Tan Magarsaa garuu, jaalalaan dhufattee, fitti harkifte. Magarsaan gaafa hasaassii isii dhagayerraa kaasee hirriiba dhabe. Urgaan jiruu bilisumaa itti suufaamaa tan jiruu gabrummaa jalaa itti ajeeysutti seente. Haalli kuni, odoo hin turin, qabsaawota daballummaaf naannoo inni jiru dhufaniin walitti fide.
Yaroon tuni, yaroo, barnoota hulaa sagalii irraa tan kudhaniitti tarkaanfachuuf qormaata fudhachaa itti ture. Tahullee, hayyummaa jiruu gabrummaa jalaarraa doofummaa tan bilisummaa jalaa filate. Filannoo sanii, gabra tahee bara dhibba jiraachuu-rra, bilisa tahee guyyaa tokko qofa buluu murteeyfartee, jalqaba ji’a Adooleeysaa, kan bara 1976-a, miseensota qabsoo hidhannoo qubaan lakkawanitti dabalamuuf qe’ee sossoohe.
Gaafni Magarsaan qabsoo bilisummaa tiif mana bahe kuni, gaafa bulchiinsi mootummaa Habashaa lammii keessatti hidda naqattee fii Xophiyummaan onnee Oromoota hedduu dhunfatte. San malees, gaafa gariin eenyummaa isaanii gatanii fii gariiniis if dhooysuuf ijibbaata cimaa godhaa turani. Walii-galatti, gaafni san, gaafa lammii Oromiyaa keessaa irra hedduun, “harqoota mootummaa Habashaa jalaa bahuun hin dandayamu,” jechuun, gabroomsaaf oggolani. Magarsaan haala akkanaa keessa, daggala gabrummaatti qaanqee wal’aansoo qabsiisuuf, firaa fii aaliin odoo hin marihatin, hiriyootaa if duubatti dhiisee, umrii joollummaa tiin, qabsoo bilisummaa tiif manaa bahe.
Amnti qabsoo ganamaa tan mukaa-citaan isiif diinaa, tan guyyaan isiif halkanii turte. San keessa iddoo takkarraa tan biraatti sossoohuun salphaa hin turre. Magarsaa, Dachaas Galmoo tii fii jaalli biraa tokko, haala akkanaa keeysa hulluuquuf, qawweeytii halkanii booda, Ganda Haajii kan Dadar irraa, karaa Ganda Alii Umarii if dura sossoohan. Isaanii dukkana dahatee sukhsukhu, akka iftiinni lafa dhunfateen, Laga Khuulloo keeysatti, tiiysitee waldaya naannoo sanii tiin halaalaa mil’ataman. Tiiysitoonni warra wal jala faana fuudhu arkaniin, sakatta’auuf, “dhaabbadhaa” halaalaa itti lallaban.
Qabsaawonni jarri isaan mil’achuu hubannaan, daran faana saffisutti seenan. Yaroo tana jarri, ajaja kennamuuf, kan qabsaawota keessa daddeemanii ummata dammaysan qaqqabuu, hujiirra oolchuuf, dirmachuu lallabachaa gama isaanii fiigan. Kan dhagaye kan hin dhagayiniif odoo dhawwaaquu, qabsaawonni tiiysitee fii namoota gandaa tiin sardaman.
Magarsaa fii qabsaawonni waan qawwee fii boombii ifirraa qabaniif ummata mancaa fii uleen itti orihanirraa sodaa hin horre. Hidhannoo qabaniin jara ifirraa ittisuun slaphaa fi. Warra faana fiigaa jiran keessaa tokko lafaan dhooynaan kanneen hafan akka if duuba deebi’an mama hin qaban. Garuu, warra ni bilisoomsinaaf mana bahanitti tarkaanfii akkasii fudhachuun, kaayoo deemaniifitti yakka hojjachuu itti tahe. Gama kaaniin, yaada manaa bahaniif murtii hadhooytuun hujiirra oolchuun hegeree qabsoo tiif bu’aa godduu akka qabu hubatan. Akkasiin, iddoo Khura ja’amti tan Araddaa Qoree fii Hariirti jiddutti arkamtutti boombii harkaa tan deemaanii turen fitti dhukaasuun if wareegan.
Haala kanaan, Magarsaa fii qabsaawonni murtii hadhooytuu fudhachuun, dhaadannoo qabsaawota qabsoo bilisummaa ummata Oromiyaa hujiin mirkaneessina. Gocha isaanii tiin ummatatti qawwee dhukaasuun, boombii darbuu fii madaafa haruun gocha diinaa malee tan qabsaawotaa akka hin tahin hujiin dhugoomsan. Akkuma hawwanitti, wareegamni isaanii, ummata naannoo sanii bira taree kanneen Oborraa hunda dammayse. Gama biraa tii niis seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa tiif boqonnaa haaraya saaqe.
Hujiin Magarsaa faa, tan bara 1976-a, tan amata afurtamii lama dura, tan qeeyroon barreen lameen dabran warra diinni meeshaa godhatee ummata Oromiyaa tiin gambroomsaa ture ittiin dammaysaniin takka. Lachuu namoota beekaa ykn wallaalaan akkaa fii akkamaletti diinaaf meeshaa tahan, wareegama lubbuu isaanii qaalii dhaan, jaalala qabaniif warra agarsiise.
Galanni isaanii bilisummaa haa tahu.
Previous The status of the Oromo National Liberation Struggle and The Prevailing Political Climate in Ethiopia (August 2, 2018)
Next JUXTAPOSING DEMOCRACY WITH THE GADA SYSTEM OF THE OROMO PEOPLE